UK ga-akwado mmeghe nke cryptocurrencies n'ụzọ iwu kwadoro - CoinWorldMap
Akụkọ nke bitcoin, cryptocurrencies na teknụzụ blockchain.
UK ga-akwado iwebata cryptocurrencies n'ụzọ iwu kwadoro
Mee 14, 2022 Nft
Ọ bụ ezie na ejighị n'aka usoro iwu na-akụta ahịa crypto na mba ndị mepere emepe, UK na-egosi na ọ kpebisiri ike ịtụgharị ihe. Mgbe okwu eze nwanyị mepere nnọkọ omeiwu ọhụrụ, UK na-ezube iwebata ụgwọ 2 iji hụ na nnabata dị ukwuu nke cryptocurrencies na usoro iji luso ọgụ ransomware ọgụ.
Na Tuesday, onye nketa nke ocheeze Britain, Prince Charles, kwuru okwu mbụ nke Queen n'ihi na Queen Elizabeth II n'onwe ya enweghị ike ịga na nke mbụ kemgbe 1963 n'ihi nsogbu dị nkenke na ịga ije. N'oge okwu ahụ, onye isi ahụ kwuru na a ga-ewepụta akwụkwọ ego 22 nwere atụmatụ "ịba ụba na ike akụ na ụba ma nyere aka belata ọnụ ahịa nke ezinụlọ" na nnọkọ ọhụrụ. N'ụzọ doro anya, nyochaa nke ndetu nkenke maka nzukọ ahụ na-ekpughe na 2 n'ime akwụkwọ 22 a tụrụ aro kwuru hoo haa okwu cryptocurrencies.
Nke mbụ n'ime ụgwọ abụọ a na-atụle bụ nke a na-akpọ Ụgwọ Ọrụ Ego na Ahịa. Dịka ntinye akwụkwọ ahụ si kwuo, ụgwọ ahụ chọrọ ịgbasa oke asọmpi UK na ọrụ ego ma na-erite uru na nnwere onwe ọhụrụ ya site n'aka ndị na-achịkwa post-Brexit. Tụkwasị na nke ahụ, ndetu ndị ahụ na-ekpughe na ụgwọ ahụ na-ezube ịkwado "nkwenye nke ọma nke cryptocurrencies" iji nweta ihe mgbaru ọsọ ya.
Ọ bụ ezie na ụgwọ mbụ ahụ chọrọ ịkwalite ọrụ crypto, nke abụọ na-achọ imebi ndị na-eji klas akụ na-eme mpụ. Mpụ akụ na ụba na mpụ nghọta nke ụlọ ọrụ ga-adaba na kleptocrats, ndị omempụ na ndị na-eyi ọha egwu na-emegbu akụ na ụba anyị mepere emepe site n'ịhụ na anyị nwetara ego ruru unyi na UK, "akwụkwọ ahụ kwuru.
Dị ka akụkụ nke usoro iji nweta ihe mgbaru ọsọ ndị a dị n'elu, UK ga-eguzobe ụlọ ọrụ ndị ga-arụ ọrụ iji "jide ma weghachite akụ crypto, nke bụ isi ụgbọ ala eji maka ransomware." N'ịgbakwụnye, a ga-edobe iwu ịla n'iyi obodo maka ndị mmadụ na-enweghị ike ịgba akwụkwọ site na UK iji gbochie ha iji ihe ha nwetara mee mpụ karịa.
A na-ahụta UK mgbe niile dị ka onye ndu na fintech. Dabere na nkwupụta sitere na HM Treasury n'ọnwa gara aga, mba ahụ na-ezube ịgbasa ya onye ndu na teknụzụ blockchain. Na nkwupụta, ZyCrypto kọrọ, gọọmentị kpughere atụmatụ ikwe ka nnabata nke stablecoins kwụọ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ.
Agbanyeghị, ọ kwụsịghị ebe ahụ, dị ka Rishi Sunak, Chancellor of Exchequer, nyere iwu ka e kee ihe Nftiji gosipụta ntinye aka nke Ụlọ Akụ nke Nna-ukwu Ya. Sunak ekwuola na mbụ na Treasury na-ezube ime ka UK bụrụ ebe maka mmepe teknụzụ blockchain.
Bitcoin Whales nọgidere na-azụrụ
Nubank nke Brazil na-enye azụmaahịa Crypto
Akụkọ cryptocurrency ndị ọzọ
Ndị isi ụlọ akụ Australia kwụsịrị ọrụ Crypto
Grand Time na-enyere gị aka nweta nnwere onwe ego
A na-atụ anya na ọnụahịa BTC ga-ebili na njedebe nke afọ
Algorand Binance Bitcoin Cardano CBDCA Chainlink Defi Dogecoin Ethereum egwuregwu fi Nft polkadot Ripple Mbido Shiba n'ime Solana Stellar Wepu VeChain
StableGains tụfuru nde $ 42 na ndị ahịa
Ọrụ nke onwe ga-emetụta mgbanwe
Anyị na-eji kuki iji kwalite ahụmịhe gị.
Site na iji saịtị ahụ, ị ​​kwenyere Usoro ojiji.
Kwadoro site na GDPR Nkwado kuki
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki ka anyị nwee ike inye gị ahụmịhe kachasị mma ọrụ. A na-echekwa kọntaktị na ihe nchọgharị gị ma na-arụ ọrụ dịka ịmata gị mgbe ị laghachiri na weebụsaịtị anyị yana inyere ìgwè anyị aka ịghọta akụkụ nke weebụsaịtị ịchọtara mmasị ma bara uru.